Luke Shaw oo isbitaalka Loola Cararay kadib dhaawac cuslus oo gaaray+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Luke Shaw oo isbitaalka Loola Cararay kadib dhaawac cuslus oo gaaray+Sawiro
Published on September 8, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(09-09-2018) Daafaca kooxda Manchester United ee Luke Shaw ayaa Waxaa soo gaaray dhaawac culus oo keenay in si deg deg ah loo geeyo isbitaal kadib markii ay isku dheceen daafaca kale ee Real Madrid Carvajal.
Luke Shaw oo dhaawacu ka soo gaaray Madaxa ayaa dhaqaatiirtu Garoonka dhexdiisa ku dabiibtay ku dhawaad mudo shan daqiiqo ah kadibna banaanka ayaa loo saaray iyada oo ay qaaday anbalaas loo diyaariyey.
Lama oga inta uu Garoomada ka maqnaan doono Xiddigaan oo ah mid dhaawacyo diloodeen isla Markaana xiligaan ka mid ahaa Cayaartoyda ugu cad cad Manchester United.
Jose Mourinho ayaa ka mid ah dadka daawanaya kulanka u dhexeeya England iyo Spain oo ka dhacaya Garoonka Wembley waxaana uu daawaday Gool uu dhaliyey Marcus Rashford iyo dhaawaca culsus ee soo gaaray Luke Shaw.
Wararkii ugu danbeeyey suuqa kala ibsiga Cayaartoyda ee Maanta
(11-12-2018) Maalin wanaagsan dhamaan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad dunida ka joogtaan, ku soo dhawaada wararkii ...
Shabakada Mail Oo Ogaatay Go’aanka Uu Paul Pogba Ka Qaatay Mustaqbalkiisa Man United & Hadii Uu Baxay Bisha January?
(11-12-2018) Manchester United ayaa loo sheegay in Paul Pogba uusan garoonka Old Trafford ka bixi doonin bisha January ...